शेयर बजारमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ ? धितोपत्र भनेको के हो ? जान्नुहोस् – Samabeshi Khabar
काठमाडौं, (ससं) । सरकार तथा कम्पनीहरुले आफुलाई आवश्यक पर्ने पुँजी संकलनका लागि जारी गर्ने वित्तीय औजारलाई धितोपत्र भनिन्छ । यो सरकार तथा संगठित संस्थाहरुद्वारा निष्कासन तथा विक्री गरिन्छ । शेयर बजारमा डिबेन्चर, बन्ड, सामूहिक लगानी कोषका एकांक लगायतका वित्तीय औजार धितोपत्रका उदाहरण हुन् ।
नेपालमा पहिलो पटक वि.सं. १९९४ मा विराटनगर जुट मिल्स र नेपाल बैंकले सेयर जारी गरेका थिए । सरकारले २०१८ सालमा पहिलो पटक ऋणपत्र निस्कासन गरेको थियो । निजी क्षेत्रबाट वि.सं.२०५४ सालमा श्रीराम सुगर मिल्सले ऋणपत्र जारी गरेको थियो । बैंकहरुमध्ये हिमालयन बैंकले वि.सं.२०५९ सालमा पहिलोपटक ऋणपत्र जारी गरेको थियो । -नेप्से